Elafibranor (GFT505) အမှုန့် - NASH ကုသမှုလေ့လာမှုအတွက်ဆေးအသစ်
Elafibranor (GFT505) ဆိုတာဘာလဲ။
Elafibranor (GFT505) အမှုန့် (923978-27-2), အဘယ်သူ၏သုတေသနဆဲဆဲစမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် Genfit ၏လေ့လာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ထိရောက်မှုအပေါ်အခြေခံသည် Elafibranor (GFT505)) အမှုန့် (923978-27-2) အရက်မဟုတ်သောဖက်တီးအသည်းရောဂါ၊ dyslipidemia၊
လုပ်ဆောင်ချက်၏ Elafibranor (GFT505) ယန္တရား
Elafibranor (GFT505) အမှုန့်သည် PPAR Subtype သုံးမျိုးအားပါးစပ်ဖြင့်ကုသခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် PPARa၊ PPARd နှင့် PPARg တို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် PPARa တွင်အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။
ကကွဲပြားခြားနားသောနျူကလီးယားအဲဒီ receptor မှ cofactors စုဆောင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ Elafibranor ယန္တရားရှုပ်ထွေးနေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဦး တည်စေသည်။
Elafibranor (GFT505) အမှုန့်သည်အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို (အထူးသဖြင့်နျူကလီးယား receptor modulatorer) လုပ်ဆောင်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးနိုင်သည်။
multimodal နှင့် pluripotent မော်လီကျူးနှစ်ခုလုံးသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင်အင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့် lipid triad ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် HDL ကိုလက်စထရောဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် LDL ကိုလက်စထရောနှင့် triglycerides လျှော့ချခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Elafibranor ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားနှင့် NASH ရှိ PPARs ကိုပစ်မှတ်ထားသောအခြားဒြပ်ပေါင်းများ၏အကြားခြားနားချက် (အရက်မပါသော steatohepatitis) သည်မည်သည့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ PPARy လုပ်ဆောင်မှုကိုမျှမပြခြင်းဖြစ်သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်, Elafibranor အသုံးပြုသူများသည် PPARy activation နှင့်ဆက်စပ်သည့်မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားရပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်; အရည်ထိန်းထားခြင်း၊ ဖောနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းသည်နှလုံးပျက်ခြင်းကြောင့်ခံစားရမည့်အန္တရာယ်တိုးပွားစေသည်။
Nash ကုသမှုလေ့လာမှုအတွက် Elafibranor (GFT505)
NASH (nonalcoholic steatohepatitis) သည်အသည်းရောဂါဖြစ်ပြီး hepatocytes ၏ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းအပြင် lipid droplets ဟုလည်းလူသိများသောအဆီများစုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ များသောအားဖြင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းစသည့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအရအရက်မပါသည့် steatohepatitis (NASH) နှင့်အရက်မဟုတ်သော fatty အသည်းရောဂါ (NAFLD) ဖြစ်သည်။
ယနေ့လူများစွာသည်ဤသေစေနိုင်သောရောဂါခံစားနေရသည်။ ၎င်းသည်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အသည်းကိုအသည်းမလည်ပတ်စေနိုင်သည့်အသည်းခြောက်ခြင်းဆီသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသည်းကင်ဆာသို့တိုးတက်နိုင်ပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်သေစေနိုင်သည်။
NASH (အရက်မပါသော steatohepatitis) နှင့်ပတ်သက်သောဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းမှာအသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်၍ လူတိုင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ပိုဆိုးသည်မှာရောဂါလက္ခဏာများသည်လက်ခဏာမပြနိုင်သည့်အပြင်နောက်ပိုင်းအဆင့်သို့ရောက်သည်အထိရောဂါခံစားနေရကြောင်းမည်သည့်အခါမျှမသိနိုင်ပေ။
NASH မှဖြစ်ပေါ်လာသောအမာရွတ်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း (nonalcoholic steatohepatitis) လည်းနှလုံးနှင့်အဆုတ်ပြicationsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယခုလူများစွာသည်အရက်မပါသောအသည်းအသည်းရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောဤအခြေအနေကိုခံစားနေရသောကြောင့်သုတေသီများသည်အသည်းအစားထိုးကုသမှုအစားအခြားကုသမှုနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်။
NASH ကုသမှုအတွက်လေ့လာနေတဲ့ဆေးတွေထဲကတစ်ခုကတော့ Elafibranor (GFT505) အမှုန့် (923978-27-2) ။ ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်ရောဂါ၏အဓိကသွင်ပြင်နှစ်ခုဖြစ်သော ballooning and inflammation ကိုအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်အတူအလှအပသည်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမဆိုခံစားစေခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှဤမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအမြန်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည် NASH ကုသမှု.
လက်ရှိတွင် Elafibranor (GFT505) အမှုန့်သည်အဆင့် (၃) လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွင်ပါဝင်ပြီး၎င်းကို RESOLVE IT ဟုလည်းခေါ်သည်။
၎င်းသည် ၂၀၁၆ ပထမသုံးလပတ်တွင်စတင်ခဲ့သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ အချိုး ၂: ၁ နှင့် double blind မပါ ၀ င်သောရလဒ်များကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာ၌ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သောလူနာများမှာ NASH (NAS> = 2016) နှင့်အသည်းပျက်စီးမှုကိုသိသိသာသာဖြစ်ပေါ်စေသော fibrosis (F2 သို့မဟုတ် F1 အဆင့်များ) ခံစားခဲ့ရသူများဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူနာများကို Elafibranor (GFT4) ဖြင့်သောက်သုံးပါလိမ့်မည်။ နေ့တိုင်းတစ်ကြိမ် 2mg သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ။
ပထမ ဦး ဆုံးစာရင်းသွင်းခံရသည့်လူနာတစ်ထောင်သည် NASH သည်ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် fibrosis ပိုမိုဆိုးရွားခြင်းမရှိဘဲ Elafibranor (GFT505) ဖြင့်ကုသနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုပြသလိမ့်မည်။
ပထမအုပ်စုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့ပြီးရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်တင်ပြပါမည်။ အစီရင်ခံချက်များအရ Elafibranor သည်အမေရိကန်ဆေးဝါးအေဂျင်စီမှခြွင်းချက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ရရှိသောကြောင့်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှအတည်ပြုခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် EMA အဖြစ်လူသိများ။
Data Safety Monitoring Board (DSMB) သည်စစ်ဆေးမှုကိုအပြောင်းအလဲမရှိဘဲထောက်ခံခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လပေါင်း ၃၀ အကြာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလုံခြုံရေးအချက်အလက်များကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပြီးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
NASH အတွက်ကုသမှုအတွက်ကြိုတင် preclinic နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက်ရလဒ်များ
NASH ကုသမှု၏ Eafafibranor ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုရောဂါပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အတိတ်ကာလများတွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။5phase 2a တွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ် Pre- ဆီးချိုရောဂါနှင့် atherogenic dyslipidemia ပါဝင်သည်။ လေ့လာမှုအတွင်း Elafibranor ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
တိုးမြှင့်အင်ဆူလင် sensitivity ကို
Cardioprotective lipid ပရိုဖိုင်းကို။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သောအဆင့် ၂ ခစမ်းသပ်မှုသည်အကြီးမားဆုံးကြားဝင်စစ်ဆေးမှုနှင့် NASH တွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Elafibranor သည် FIBRISIS ၏ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းမရှိဘဲ NASH Resolution ၏နောက်ဆုံးမှတ်ကို FDA မှထောက်ခံချက်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သောကမ္ဘာ့အဆင့် ၃ စမ်းသပ်မှု၏အဓိကအဆုံးမှတ်ဖြစ်သည်။
Elafibranor နှင့်အတူ NASH ကုသမှုခံယူသောလူနာများသည် ALP, GGT နှင့် ALT စသည့်အသည်းကမောက်ကမဖြစ်မှုအမှတ်အသားများတိုးတက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလယ်အဆုံးမှတ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် Elafibranor (GFT505) သောက်ဆေး ၁၂၀ မီလီဂရမ်သည် NASH နှင့်ဆက်စပ်သော cardiometabolic အန္တရာယ်အချက်များအပေါ်ကုထုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများပေးကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက်အင်ဆူလင် sensitivity နှင့်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်စဉ်တိုးတက်မှု
lipoproteins နှင့် plasma lipids အဆင့်များကိုတိုးတက်စေသည်။
ကလေးအထူးကု NASH ကိုကုသရာတွင် Elafibranor ၏ထိရောက်မှု
ကလေးများအဝလွန်ခြင်းကိုခံစားနေရသောနှုန်းသည်သိသိသာသာများပြားလာပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုတိုးပွားစေသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၎င်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် NAFLD(အရက်မပါသောအသည်းအသည်းရောဂါ) သည်ကလေးလူ ဦး ရေ၏ ၁၀-၂၀% ခန့်ကိုထိခိုက်သည်။ ထို့အပြင်ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် NAFLD သည်အသည်းပျက်ဆီးခြင်း၊ အသည်းရောဂါဗေဒအပြင်အသည်းကိုထည့်သွင်းခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် NASH ကလေးအထူးကုအစီအစဉ်ကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့သည်။ Elafibranor သည်လူကြီးများတွင် NASH ကုသမှုတွင်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးကလေးငယ်များကုသမှုတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တွင်ရှိနေသည်။
Nash ကုသမှုတွင် Elafibranor ကိုအခြားဆေးများနှင့်အတူသုံးနိုင်ပါသလား။
Elafibranor သည် NASH ဆေးကုသမှုကိုသူ့ဟာသူအသုံးပြုသောအခါထိရောက်မှုရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ သို့သော်ရောဂါ၏ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်အသည်း fibrosis၊ NASH နှင့်၎င်းတို့၏တွဲဖက်ရောဂါများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အခြားဆေးများနှင့်အတူတကွအသုံးပြုနိုင်သည်။
Elafibranor (GFT505) သည်အခြားအသုံးပြုမှုများ
Cholestasis သည်သည်းခြေရည်နှင့် dododenum မှတစ်ဆင့်သည်းခြေဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်၎င်း၏စီးဆင်းမှုကိုချွတ်ယွင်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စနစ်ကျသောရောဂါများနှင့်အသည်းရောဂါ၊ အသည်းပျက်ဆီးမှုနှင့်အသည်းအစားထိုးကုသမှုပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Elafibranor (GFT505) အမှုန့်သည်ပလာစမာရှိဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမှတ်အသားများကိုလျော့နည်းစေပြီး၎င်းသည် cholestasis ရောဂါကုသရာတွင်အသုံးဝင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ဆီးချိုရောဂါသည်သွေးထဲတွင်သကြားသို့မဟုတ်ဂလူးကို့စ်အလွန်အကျွံရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူပေါင်းသန်းလေးရာဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်သည်။ လူတစ်ယောက်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်အင်ဆူလင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးအသုံးမပြုနိုင်ရင်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လာတယ်။
elafibranor ကိုလေ့လာခြင်းကဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ကိုတိုးတက်မှုနည်းစေတယ်ဆိုတာပြသခဲ့တယ်။ ပထမတစ်ခုမှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်စဉ်တိုးတက်မှုမှတဆင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစကြွက်သားများနှင့်အရံတစ်ရှူးများတွင်အင်ဆူလင် sensitivity ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အဆိုပါ Elafibranor လေ့လာမှု NASH ခံစားနေရပြီးသူမည်သူမဆိုမှသတင်းကောင်းအဖြစ်လာပါတယ်။ ယနေ့အထိလူနာရှစ်ရာကျော်အားနှုတ်ဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ပြီး၎င်းသည်အသုံးဝင်ကြောင်းပြသခြင်းဖြင့်လူများသည်အသည်းအစားထိုးကုသမှုခံယူစရာမလိုတော့ကြောင်းမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။
အဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည် Elafibranor မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က sitagliptin, simvastatin, သို့မဟုတ် warfarin နှင့်တွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်အခြားဆေးများနှင့်အတူဘေးကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Elafibranor သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကောင်းစွာဒဏ်ခံနိုင်ပြီးမည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမှမပြပါ။
အင်ဒရူးဂျေ။ ကာရင်ဇ်၊ ခရစ်ယာန် Weyer၊ မားကတ်စ်ဟမ်းပက်ရှ်၊ Springer Nature၊ စာမျက်နှာ ၂၆၁ မှတည်းဖြတ်သောဆီးချိုရောဂါ၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာမပါသောသုတေသနနည်းစနစ်များ။
ဆဲလ်လာနှင့် - တစ်ကိုယ်လုံးစွမ်းအင် metabolism ရှိ PPARs - ဝေါလ်တာ ၀ ယ်၊ ရေချယ်တီ၊ ၄၅၇-၄၇၀ တည်းဖြတ်သည်။
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ မြောက်ပိုင်း၏အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးခန်းများ၊ Octavia Pickett-Blakely၊ လင်ဒါအေလီ၊ စာမျက်နှာ 1414-1420
1. Elafibranor (GFT505) ဆိုတာဘာလဲ။
လုပ်ဆောင်ချက်၏ 2.Elafibranor (GFT505) ယန္တရား
Nash ကုသမှုလေ့လာမှုအတွက် 3.Elafibranor (GFT505)
NASH အတွက်ကုသမှုအတွက် preclinic နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက် 5. ရလဒ်များ
7. Nash ကုသမှုတွင် Elafibranor ကိုအခြားဆေးများနှင့်အတူသုံးနိုင်ပါသလား။
8.Elafibranor (GFT505) သည်အခြားအသုံးပြုမှုများ